एस डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड . | गृहपृष्ठ
Home लगानी एस डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड .
एस डेभलपमेण्ट बैङ्क लिमिटेड .
सर्म्पर्क कार्यालय : नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौँ
स्थापना : २०५२ साल श्रावण २१
अध्यक्ष : योगेन्द्र शाक्य
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : सिद्धान्तराज पाण्डे
शाखा कर्यालयहरु : ९
संस्थापक : ५१ प्रतिशत
सर्वसाधारण : ४९ प्रतिशत
यो विकास बैङ्क विसं २०५२ श्रावण २१ गते ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापना भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाबाट विकास बैङ्कमा स्तरोन्नति हुने यो पहिलो वित्त कम्पनी हो । यस बैङ्कले मर्चेण्ट बैङ्किङसम्बन्धी निष्कासन प्रबन्धक, शेयर रजिष्ट्रार, पोर्टफोलियो व्यवस्थापनजस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ । यो बैङ्क नेपालको सबैभन्दा ठूलो निष्कासन प्रबन्धकको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस बैङ्कले नेपालमै पहिलोपटक सुनको ईटीएफ (एक्सचेञ्ज ट्रेडेड फण्ड) शुरुआत गरेको थियो ।
यस सेवाप्रति धेरै लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सुन कारोबारसम्बन्धी नीतिका कारण अहिले यो सेवा बन्द छ । यस बैङ्कको चुक्ता पूँजीमा साधारण लगानीकर्ताको हिस्सा ४९ प्रतिशत रहेको छ । यस बैङ्कको १५ औं वार्षिक साधारणसभा आज हुँदै छ । उक्त सभामा बैङ्कले आफ्ना शेयरधनीहरुलाई ८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम छ ।
यस कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयर मूल्यलाई प्राविधिक आरएसआई चार्टद्वारा विश्लेषण गर्दा आरएसआई रेखा स्केल ३० र ७० का बीचमा छ । यसले कम्पनीको शेयर मूल्य न्यूट्रल जोनमा रहेको देखिन्छ । केही महीनादेखि सामान्य उत्तारचढाव भइरहेको यस बैङ्कको शेयर मूल्य न्यूट्रल जोन र ओभरसोल्ड जोनमा तल-माथि गरिरहेको छ । केही समयअगाडि स्केल ३० लाई छोएर पुन: उकालो लागेको यस बैङ्कको आरएसआई रेखा अहिले स्केल ४५ तिर उन्मुख देखिएको छ ।
त्यसका आधारमा यस बैङ्कको शेयर मूल्यमा सामान्य वृद्धि हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छ । त्यसकारण, यस कम्पनीको शेयर खरीद गर्न चाहने लगानीकर्ताले ओभरसोल्ड बुलिश रिभर्सल अथवा डब्लू प्यार्टनको प्रतीक्षा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसै गरी, बिक्री गर्न चाहनेहरुले अझै केही समय प्रतीक्षा गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
चालू आव २०६७/०६८ को अपरिष्कृत प्रथम त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यस कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु. ७५ करोड रहेको छ । साथै यस आवको प्रथम त्रैमाससम्ममा यस कम्पनीले रु. ८५ लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षो सोही अवधिको तुलनामा १ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी हो । त्यसै गरी, यस बैङ्कको जगेडा कोषमा रहेको रकम पनि अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा २३ दशमलव ५७ प्रतिशत बढेर रु. ८ करोड ४१ लाख पुगेको छ । सोही अवधिमा यस बैङ्कको निक्षेप ५८ दशमलव १० प्रतिशतका उच्च दरले वृद्धि भएर अहिले रु. ४ अर्ब ३५ करोड पुगेको देखिन्छ । साथै बैङ्कको ऋण प्रवाह पनि ३१ प्रतिशतले बढेर अहिले रु. ३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । तर, बैङ्कको लगानी भने अघिल्लो वर्षो सोही अवधिको तुलनामा १७ दशमलव ७१ प्रतिशत कम भएर रु. ७२ करोड ५६ लाखमा सीमित भएको छ । यसरी बैङ्कको लगानीको दायरा केही साँघुरिएकाले आगामी दिनमा यसले आर्जन गर्ने मुनाफामा कमी आउने सम्भावना बढेको छ ।
यस बैङ्कका वित्तीय परिसूचकहरुमा खासै राम्रा सुधारका सङ्केत देखिएका छैनन् । केही वर्ष पहिलासम्म उत्साहप्रद रहेको यस कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी र मूल्य-आम्दानी अनुपातमा आव २०६४/०६५ र २०६५/०६६ मा खासै सुधार हुन सकेन । तर, आव २०६६/०६७ मा ती परिसूचकहरूमा सामान्य सुधार देखिएको छ । अहिले यस कम्पनीको प्रतिशेयर आय रु. ९ दशमलव ७१ रहेको छ भने मूल्य-आम्दानी अनुपात २४ दशमलव २१ गुणा छ । यसले कम्पनीले कमाउने रु. १ आम्दानीका लागि लगानीकर्ताहरूले रू. २४ दशमलव २१ मूल्य तिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी, यस कम्पनीको किताबी मूल्य रु. १ सय १८ दशमलव ४३ छ भने मूल्य-किताबी मूल्य अनुपात १ दशमलव ९८ रहेको छ । बैङ्कको मूल्य-आम्दानी अनुपातले यसको शेयर बजार मूल्य न्यून मूल्याङ्कन भएको देखाए पनि मूल्य-किताबी मूल्य अनुपात भने स्वाभाविक नै रहेको छ । विगतका वर्षमा उच्च देखिएको मूल्य आम्दानी अनुपात अहिले घटेर न्यून तहमा आएको छ । त्यसै गरी बैङ्कले दुइ वर्षयता बोनस शेयर वितरण नगरी नगद लाभांश मात्र वितरण गरिरहेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्षनगद लाभांश ३ प्रतिशतले बढाएर ८ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।
वाषिर्क शेयर कारोबार विश्लेषण :
यस कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा निरन्तर कारोबार नहुने गरेकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्नका लागि केही समस्या देखिन्छ । यसले गर्दा आफूलाई चाहिएको समयमा यस कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न तथा त्यसलाई निसर्ग गर्न सजिलो नभएको अवस्था देखाउँछ । सट्टेबाजहरूले यस बैङ्कको शेयर मूल्यमा हुने उतारचढावको अवस्थालाई उपयोग गरेर मुनाफा कमाउने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।
सन् २००९ जनवरी १ देखि हालसम्मका २ सय ९१ दिनमा १ हजार २ सय ३९ कारोबारमार्फत यस कम्पनीका २ लाख १ हजार ४ सय ७४ कित्ता शेयर खरीद-बिक्री भएको देखिन्छ । उक्त अवधिमा यस कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा उच्च रु.९ सय ४० तथा सबैभन्दा न्यून रु.२ सय ६ सम्म पुगेको देखिन्छ ।